Carruur lagu biirin rabay Al-Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay, sidee ku suurta-gashay? | HalQaran.com
Carruur lagu biirin rabay Al-Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay, sidee ku suurta-gashay?
Siaya (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay badbaadiyeen shan carruur ah oo la doonayay in lagu biiriyo dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab Gobolka Siaya ee dalkaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Siaya Michael ole Tialal, ayaa sheegay in shanta Carruurta ah laga hortagay in ay ku biiraan Al-Shabaab, kaddib markii la helay xog la xiriirta in halkaas lagu qorayay.
Hay’addaha ammaanka dalka Kenya ayaa sheegay laba nin oo midkood deggan yahay Busia looga shakiyay in ay arrintan ka shaqeynayeen baaaritaanna ku socdo.
Michael ole Tialal, ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale Hay’adaha sirdoonka Kenya ay ka warhayaan laba Carruur ah oo sanadkii hore u baxsaday dalka Tanzania kuna biiray Al-Shabaab.
“Ninka la tuhmayo in uu Al-Shabaab Dhallinyarada uga qoro degaankaas ayaa sanado ka hor qaatay Diinta Islaamka, waxaa uu tababar u aaday Soomaaliya kaddibna dib uyuu ugu laabtay Kenya isaga oo qaabilsan qoridda dhallinyarada.” ayuu yiri Guddoomiye Tialal.
carruur lagu biirin rabay Al Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay